Apple Inovandudza AirPort Yakanyanya, Express uye Nguva Capsule Firmware | IPhone nhau
Apple Inovandudza AirPort Yakanyanya, Express, uye Nguva Capsule Firmware
Vhiki rino vakomana vanobva kuCupertino havana kungozvipira pachavo kuvhura mabheji matsva eanoshanda masisitimu avari kutarisa mumwedzi ichangopfuura, asi vakatorawo mukana ku kusunungura firmware update ye Time Capsule, AirPort Express, uye AirPort Extreme base station. Zviripachena, chikonzero chikuru cheichi chigadziriso hachisi chimwe kunze kwekuvandudza mashandiro uye mabhenefiti emidziyo iyi, pamusoro pekugadzirisa madiki madhizaini ekuita uye kugadzirisa kugadzikana kwavo. Zviteshi zve802.11n zvine firmware 7.6.7 zvichimirira apo 802.11ac zviteshi zvine firmware update 7.7.7 yakamirira.
Izvo zvinogara zvichikurudzirwa kugadzirisa firmware yemidziyo yedu kune yazvino vhezheni kune kukwanisa kubatsirwa nekuvandudzwa kunosanganisira Apple mune yega yega, saka kana iwe ukashandisa chero cheizvi zvigadzirwa zvepamhepo, chinhu chakanakisa chaungaite kuti usvike kumba kuzvigadziridza. Kuti uite izvi, unogona kushandisa application yeAirPort yeIOS kana kushandisa chishandiso chinowanikwa mune yemenyu yeOS X. Paunomhanyisa application, zvishandiso zvatiinazvo mumba medu kana kubasa. Avo vakamirira kuti vagamuchire firmware yazvino vacharatidza denderedzwa dzvuku, izvo zvinoratidza kuti gadziriso yakamirira.
Mukutsanangurwa kwemidziyo iyi, tinogona kuona ruzivo rweichi chiitiko:
Solution yekukundikana iyo yaidzivirira kutaurirana pakati pemidziyo mukati meiyo imwechete network.
Kugadziridza kwekuita patinogadzira yakawedzera yevaenzi network.
Yakagadziriswa ingangoita zita remakakatanwa nenyaya neBonjour Kurara Proxy
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Inovandudza AirPort Yakanyanya, Express, uye Nguva Capsule Firmware
LetMeSwitch inotibvumidza kuchinjika pakati pemakhibhodi nenzira inokurumidza (Tweak)
Yekukurumidza kuenzanisa pakati peIOS 9.3.2 uye yekutanga beta yeIOS 9.3.3